Atụmatụ 4-Point iji gbanwee ndị ahịa B2B gị n'ime Brand Evangelists | Martech Zone
Ọ bụrụ n’ị nọ na-eme mgbede n’obodo ị na-agatụbeghị wee nwee nkwanye ụlọ oriri na ọ twoụ twoụ abụọ, otu site na ndị na-enye ndị ọbịa na họtel na otu onye enyi gị, eleghị anya ị ga-agbaso ndụmọdụ enyi gị. Anyị na - ahụkarị echiche nke ndị anyị maara ma nwee mmasị karịa nkwenye ndị ọbịa - ọ bụ naanị ọdịdị mmadụ.
Nke ahụ bụkwa ihe kpatara ụdị azụmaahịa na-azụ ahịa (B2C) ji etinye ego na mkpọsa mmetụta - ndụmọdụ ndị enyi bụ ngwa ọrụ mgbasa ozi siri ike. Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ ahụ na azụmahịa na-azụ ahịa (B2B) ụwa kwa. N'oge ochie, ndị ahịa nwere ike ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa, gụọ nyocha ụlọ ọrụ ma ọ bụ budata broshuọ ahịa. Ugbu a, ha na-elegara ndị ọgbọ ha anya 95 percent gụọ nyocha ntanetị.
Ebe ọ bụ na ndị ahịa B2B gị na-ewere ọtụtụ nzọụkwụ tupu ha agwa onye na-ere ahịa okwu, ọ bụ ọrụ azụmaahịa ịzụlite na-eduga n'elu ọnụ ahịa ahịa n'ụzọ kachasị dị irè. Ngwá ọrụ mgbasa ozi kachasị dị irè bụ ndị na-ezisa ozi ọma - ndị ahịa hụrụ ngwaahịa gị n'anya ma dị njikere ịkọkọrịta ahụmịhe ha na ndị ọgbọ. Nke a bụ atụmatụ iji nyere gị aka ịmepụta ndị agha nke ndị nkwusa ozioma:
Kwụpụ 1: Lekwasị anya na Ndị Ahịa nke Ọma
Na njedebe nke ụbọchị, ndị ahịa B2B nwere mmasị na ngwaahịa gị n'ihi na ọ na-enyere ha aka ịga nke ọma na ọrụ ahụ. Yabụ, ịmepụta ndị na-ezisa ozi ọma, mee ka ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa bụrụ ebumnuche gị otu. Ọ ghaghị ịbụ ihe jikọrọ ọdịbendị ụlọ ọrụ gị, na ndị ọrụ ọ bụla na ọrụ ọ bụla kwesịrị ịghọta na ebumnuche gị kachasị mkpa bụ inyere ndị ahịa aka ịga nke ọma.
Isi ihe ọzọ ị ga-eburu n’uche bụ na ihe a tụrụ atụ bụ ihe emegoro, yabụ mee ka ihe ịga nke ọma ndị ahịa bụrụ ihe nrụpụta dị mkpa nke ndị ọrụ nyere na njigide. Inyere ndi ahia aka idozi nsogbu (nkwado ndi ahia) na ichota uzo di elu (ahia) di oke nkpa, mana ihe nile aghaghi ighaghachite na ebumnuche di elu nke oganihu ndi ahia.
Nzọụkwụ 2: Na-ekwurịta Okwu Na Mgbe Mgbe
Nkwurịta okwu ndị ahịa dị mkpa na ọkwa ọ bụla nke mmekọrịta ahụ, mana ọ bụ nnukwu echiche ịtọ ọkọlọtọ n'otu ụbọchị, dị ka windo elekere 24 maka ndị otu ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa iji ruo mgbe ndị ahịa ọhụụ batara. Nkwukọrịta okwu mbido na-egosi ụda ma gosipụta mkpebi gị maka ihe ịga nke ọma nke onye ahịa ọhụrụ.
Ọ dịkwa mma ịtọghe akara aka mgbe niile ka ị nwee ike ijide n'aka na ị ghọtara mkpa na ebumnuche ndị ahịa, nke ga-agbanwe oge. Mkparịta ụka mgbe niile na-eme ka ndị otu gị nọrọ na ntanetị maka ebumnuche ndị ahịa, yana ọ nwekwara ike ịdọ gị aka na ntị oge gboo banyere nsogbu na - apụta ka ị nwee ike idozi ya ma debe mmekọrịta ahụ na egwu.
Nzọụkwụ 3: Gbaa mbọ hụ na Ndị Ahịa Na-aga nke Ọma na Ndị Ọrụ Ahịa Na-arụkọ Ọrụ
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mee ka ndị ahịa gị na-azụ ahịa na-ebute ndị ahịa ihe ịga nke ọma na tebụl tupu ha emechie azụmahịa ahụ. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji gosipụta mkpebi gị maka ihe ịga nke ọma ndị ahịa, ọ na-enyekwa ndị otu ọfụma ahịa ohere ịme mmekọrịta tupu nsogbu ọ bụla ebilite.
Uru ọzọ nke ịrekọrita ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ bụ na ọ na-eme ka mmadụ niile nwee otu peeji ahụ gbasara atụmanya ndị ahịa ma na-enye onye ọ bụla ohere ịlele ọkwa nkwado onye ahịa ọhụrụ ga-achọ maka mmejuputa nke ọma. A ezigbo handoff dị mkpa maka ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa - na mmekọrịta dị n'ime.
Kwụpụ 4: Mgbe XNUMX Mejọrọ, Rịọ mgbaghara ma mezie ya
Onweghi onye zuru oke, ma n'oge na-adịghị anya, ndị otu gị ga-emehie nke metụtara ndị ahịa. Otú i si edozi ya ga-agwa ndị ahịa ọtụtụ ihe gbasara ntinye onwe gị maka ihe ịga nke ọma ha. Ndị ọrụ kwesịrị ịnwe mmejọ, rịọ mgbaghara ma lekwasị anya na idozi nsogbu ahụ karịa ịgbanye ụta ma ọ bụ ịgbachitere onwe ha.
Mkparịta ụka ndị ahịa gị na-eme mgbe niile kwesịrị inye gị ohere iji dozie nsogbu tupu ha abịa ọha. Ma oburu na inwetara ihe nleghari anya, atula ujo - odi ime ka odi nma, ma oburu na ijikwa ya nke oma, inwere ike ime ka mmekorita di ike. Burukwa n'uche na 89 percent nke ndị ahịa nwere ike gụọ nzaghachi azụmaahịa maka nyocha na-adịghị mma.
Ihe Kasị Mkpa
Ga-achọpụta na usoro ọ bụla na atụmatụ atụmatụ anọ a gụnyere ọganiihu ndị ahịa. Nke ahụ bụ n’etiti atụmatụ ọ bụla iji mee ka ndị ahịa bụrụ ndị nnọchi anya ama ama. Inye ihe ndi ozo, ijiko aka na nzuko, icheta aha ndi ozo na umuaka, wdg, nwere ike iwulite mmekorita ndi mmadu. Mana n’ikpeazụ, ihe kachasị mkpa bụ na ngwaahịa gị na-enyere ndị ahịa aka ịrụ ọrụ ha nke ọma.
Ya mere, cheta na ị nwere ọdọ mmiri nke nwere ike ime ihe: ndị ahịa gị. Lekwasị anya na ihe ịga nke ọma ha, soro ha na-akpakọrịta, soro ndị ọrụ ibe gị na-emekọrịta ihe, ma nwee mmejọ ka ị nwee ike idozi njehie ngwa ngwa. Mgbe itinye atụmatụ atụmatụ anọ a n'ọrụ, ị ga - enwe ike ịmepụta ntọala nke ndị na - agba ọsọ, nke ahụ bụ ụdị mgbasa ozi ị na - enweghị ike ịzụta n'ụgwọ ọ bụla.
Tags: ika akwadoonye nnochite anya ndi ozoika evangelismoziomanyocha ndị na-adịghị mma